Ahoana no ananan'ny lanjan'ny loha loha 24 loha milanja 4 na 6 karazana vokatra hafa?
Tianao ny mihinana voam-bary mifangaro, voankazo maina ary sakafo hafa, na dia misy sakafo mifangaro aza. Mafana ary malaza amin'ny tanora ny fampifangaroana. Niakatra haingana ny takiana amin'ny tsena, ny mpanamboatra sakafo maivana dia mitady milina famonosana milanja mandeha ho azy mba hampidina ny ...
Ahoana no hisafidianana ny modely marika multihead?
Miaraka amin'ny halafon'ny mpiasa, ny takiana haingam-pandeha, ny orinasa maro be misimisy kokoa no hisafidy mpandanja maro loha hahatratra ny lanjan'ny fiara. Saingy fantatrao ve ny fomba fisafidianana modely marina amin'ny fampihenan-doha multihead ho an'ny sakafonao? Misy lafin-javatra telo mila dinihin'ny orinasa mpanamboatra sakafo? 1.Speed ​​requiredem ...